IWEGHACHITE BOOTLOADER BUUT IMEZI NA UBUNTU - LINUX - 2019
Mezi GRUB bootloader site na Boot-Repair na Ubuntu
Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịnweta ọnọdụ ndị a: ịchọrọ ihichapụ faịlụ, mana Windows na-enye ozi dịgasị iche gbasara enweghị ike ịmepụ mmemme a. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara nke a, mana naanị ịmalitegharịa kọmputa na nhichapụ nhichapụ ga-enyere aka.
Iji dozie ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ọ bara uru ịnwe mmemme na kọmputa gị maka ihichapụ faịlụ ndị a na-edeghị aha. A na-ahazi ngwanrọ dị otú ahụ iji gbochie iwepụ ihe ndị ahụ na-egbochi.
Isiokwu ahụ nyere 6 ihe ndị dị otú ahụ n'efu. Ha ga - enyere gị aka ihichapụ faịlụ nke egbochiri ma ọ bụ n'ihi mmemme nje.
IObit Unlocker bụ usoro n'efu iji wepụ ihe niile eji wepu ya. Ọ na-enye gị ohere ọ bụghị naanị ka ihichapụ faịlụ ndị ekpochidoro, kamakwa itinye ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ na ha: detuo, nyegharịa, kwaga.
IObit Unlocker na-egosiputa ọnọdụ nke ngwanro na-egbochi otu ma ọ bụ ọzọ mmewere site na-ehichapụ, n'ihi ya ị nwere ike ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ na mwepụ.
Ihe ọjọọ bụ na ngwa ahụ enweghị ike ịchọpụta mgbe ọ bụla ọnọdụ nke faịlụ ahụ. Mgbe ụfọdụ, a na-egosiputa ihe ejiri gbochie dị ka ihe nkịtị.
Uru nke ngwa ahụ bụ ọdịdị dị ụtọ na ọnụnọ nke asụsụ Russian.
Lok Hunter bụ usoro ọzọ iji wepu faịlụ echechiri. Ị nwere ike ihichapụ, gbanwee aha ahụ ma detuo nsogbu ahụ.
Ngwa ahụ gosipụtara faịlụ niile ekpochidoro, na egosikwa ihe kpatara igbochi.
Enweghi ike bụ enweghị nsụgharị nsụgharị nke ngwa ngwa.
Ihe omumu: Otu esi wepu faịlụ ma obu nchekwa site na iji LockHunter
Ngwa ahụ nwere aha dị egwu, nke a sụgharịrị dịka "onye na-egbu faịlụ," ga-enye gị ohere iwepụ ihe ndị a na-edeghị na kọmpụta gị ngwa ngwa. I nwekwara ike iwepu usoro nke mere ka ị ghara ihichapụ.
Onye na-egbu ihe nchịkọta nhọrọ bụ enweghị nsụgharị nke nsụgharị nke ihe omume ahụ.
Unlocker free faịlụ
Njikwa Free Unlocker bụ usoro n'efu iji wepu ihe ekpochi. Dị ka ngwọta ndị ọzọ yiri nke ahụ, ọ na-enye gị ohere ime mmemme ọzọ ole na ole na faịlụ ahụ ma e wezụga, n'eziokwu, nhichapụ.
Ngwa ahụ na-egosikwa ụzọ nke usoro ihe omume ahụ na-anaghị ekwe ka ihichapụ ihe ahụ. Njikwa Free Unlocker nwere nsụgharị dị na-anaghị achọ nkwụnye.
N'elu ala, ọzọ, enweghi nsụgharị n'asụsụ Russian.
Unlocker n'ụzọ zuru ezu na-eme ka aha ya dị mfe. Ihe niile interface bụ 3 bọtịnụ. Họrọ ihe na faịlụ ma pịa bọtịnụ "OK" - ihe niile ị ga - eme iji dozie ihe ị ga - ehichapụ na Unlocker.
N'ihi na ọ dị mfe, ihe omume ahụ na-akpata n'ihi enweghị ọrụ. Ma ọ dị mfe ma dị mma maka ndị ọrụ kọmputa novice. Tụkwasị na nke ahụ, interface ngwa ngwa nwere asụsụ Russian.
Ị kpọghee ekwt IT bụ otu n'ime ngwanrọ ngwanrọ kasị mma maka iwepụ faịlụ na nchekwa. Nke a na-akọwa site n'eziokwu na ngwaahịa a na-egosiputa ihe ọmụma zuru oke gbasara ihe kpatara igbochi: ngwa ahụ na-egbochi usoro, ebe ọ dị, ihe dị ngwa ngwa ahụ nwere na usoro nke ụlọ akwụkwọ a na-eji. Nke a na-enyere ọtụtụ aka mgbe ọ na-abịa ịlụso nje virus blocker ọgụ.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ime ọtụtụ omume na ihe ekpochiri, ma rụọ ọrụ na nchekwa.
Ihe ndị na-adịghị mma gụnyere enweghị nsụgharị Russian na interface dị ntakịrị.
Site n'enyemaka nke mmemme a, ị nwere ike ihichapụ faịlụ na nchekwa na kọmputa gị ngwa ngwa. Ịkwesighi ịmalitegharịa kọmputa maka nke a - naanị tinye ihe ahụ egbochie na ngwa ahụ ma hichapụ ya.